admin | Somali Association for the Blind (SAB) | Page 3
Cabdiqaadir Geele Jaamac Oo kamid noqday dhalinyarada araga la` ee heesta Degree Bachelor
MUQDISHO SAB: Dadaal iyo dulqaad dheer kadib ayaa c/qaadir geele jaamac oo kamid ah dhalinyarada araga la` ee somaliyeed waxa uu sanadkan kamid noqday aradayda ka qalin badlanaysa kuliyadda Cilmiga Bulshada (social science) ee jaamacada Somalia (UNISO) ee magalada muqdisho. Cabduqaadir oo waxbarshadiisa hoose dhaxe iyo sare waxuu ku soo qaatay dagmada guriceel ee gobolka galgaduud , waxana uu umahad ...
Tabar Ku Saabsan Wada Shaqeen Kooxeed Oo Loo Qabtay Xubno Ka Tirsan Ururka Indhoolayaasha Somaliya
Muqdisho SAB : Tabarkan oo ay ka faa iidaysteen xubno ka tirsan ururka indhoolayaasha somaliyeed ee SAB ayaa lagu barnayay wada shaeen kooxeed (Team work ) waxaana tabarkaasi bixinayay DR. Qaasim Axmad Jimcaale oo kamid ah barayaasha jamacadaha muqdisho iyo Ustaad Maxme Axmad Maxmed madaxa arimaha bulshada ee ururka.
Ardyadii Ugu Horaysay Ee Ka Qalin Badalanaysa Dugsiga Dhaxe ee Indhoolayaasha Al-Nuur Oo Bandhigooda Ugu Dambeyay Ka Sameyay Dugsigaasi (DAAWO SAWIRADA).
Ardayda fasalka 9aad ee dugsiga indhoolayaasha AL-nuur oo noqonaya kuwii ugu horeya ee ka qalin badasha dugsigaas ayaa manta waxay sameyeen bandhig balaaran oo ay ku soobandhigeen barnaamijyo ay u bogeen guud ahaan aradayda maclimiinta maamulka iyo masuuliyiin ka soctay Hormuud Telcom Foundation ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi. Barnaamijyada xiisaha badan ay soo bandhigeen oo kubaxayay luuqadaha somaliga carabiga iyo ...
Idaacada Starfm iyo Ururuka indhoolayaasha somaliyeed (SAB) oo hirgliyay barnaamijka GARGAAR oo lagu caawinayo dadka araga la` ee ku nool Somaliya.
ujeedka barnaamijka waa hormarinta dadka araga la` sida aqoonta xirfadaha iyo nolasha iyo in laseemyo barnaamij indhaha loogu fiiqayo laguana daawenayo dadka araga ka xanuunsanaya, si looyareeyo arag yarida. waxaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaa adiooga wacaya nambarka wacitaanka idaacad ee +252-616000555 ama waxaad awoodi ugu dir namabarkaaan oo uu gacanta ku hayo ururka Somali Assoc Blind Sab 612673774 ama 612673773 ...
Ardaydii ugu horaysay ee ka qalin jabisa dugsiga indhoolayaasha Alnuur oo Laptob-yo loogu qaybiyay magalada Muqdisho.
Munaasabad lagu qabtay magalda Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan dawladda somaliya masuuliyin ka soctay hayadda Hormud foundation iyo maamulka iyo maclimiinta dugsiga indhoolayaasha Al-nur iyo marta sharif kale. Ardayada qalin jabinaysay oo aheed 12 arday ayaa lasiiyay midwaliba oo kamid ah compitar laptob iyadoona ardayda kaalimaha ugu horeysa kashayna ayaa lagudoonsiyay . HAMABALYO ARDAYDA ALNUUR IYO ...
Ururka indhoolayaasha somaliya ee SAB oo deeq lacago ah ka qaybiyay magalada muqdisho iyo qaarkamid ah gobolada dalka.
Ururka SAB oo utaagan caawinta iyo udoodista dadka araga la` ee somaliya ayaa deeq lacago ah u qaybiyay qaar kamid ah dadka araga la ee ku nool magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Baladweyne, Cadaado iyo dagmada Af-gooye. Lacagaahaasi oo ka timid muxsiniin ka qayb qaadatay barnaamijka GarGaar ee Idaacada Star fm ee magalada muqdisho ayaa kamahad celiyay dadkii ka faa`idaystay deqahaasi oo ...
shirweynaha ururka indhoolayaasha somaliyeed oo lagu qabtay magalada Muqdisho.
shirka golaha guud ee ururka indhoolayaasha somaliya oo sanadkii laba jeer la qabtay ayaa lagu qabtay xarunta dhaxe ee ururka SAB ee magalada Muqdisho iyadoona ay ka qayb galeen xubnaha labada gole ee ururka, iyo sidoo kale aqoonyahano lagu marti qaaday furitaanka shirka. shirka golaha guud ee ururka oo looga tashto ayaaha dadka araga la` ee somaliyeed iyo hormarinta ururka ...